Siyaabaha loo Falanqeeyo Waxqabadkaaga SEO ee Semalt
WAA MAXAY SAMEEYAASHA DHAQANKA SEO?
MUUQAALAHA KU SAABSAN SHAQADA SEO
DIIWAAN GELINTA DHAQANKA SEO SIFALT
Maalin kasta milkiileyaasha websaydhada badan, milkiileyaasha websaydhada, falanqeeyayaasha, iyo wakaaladaha suuq gaynta ee dhijitaalka ah ayaa maalin kasta maskaxda ka geeya sidii kor loogu qaadi lahaa darajaynta boggooda internetka ama macmiilkooda natiijooyinka raadinta Google.
Dhammaan dadaalkooda waxay ku saabsan yihiin hal xilli, SEO . Aqoonsashada iyo hirgelinta baahiyaha SEO-ga waxay ka caawineysaa inay wanaajiso booska websaydhka ku yaal bogagga shabakadda 'SERPs (bogagga Natiijada Mashiinka Raadinta).
Waxaa jira aalado la heli karo si loo falanqeeyo waxqabadka SEO ee mareeg, laakiin helitaanka saxda ah wax aan ka yaraynayn ku guuleysiga kala badh darajada dagaalka.
Maqaalkani wuxuu ku siinayaa fahamka falanqaynta waxqabadka SEO iyo sida isha lagu kalsoonaan karo, Semalt, ay kaa caawin karto inaad gaarto yoolalkaaga SEO.
Haddii aadan sugi karin inaad ka faa iideysato websaydhka falanqaynta ee Semalt, halkaan guji oo ku raaxee. Waxaad sidoo kale sii wadan kartaa akhrinta maqaalka waxaadna baran kartaa qaababka loo falanqeeyo waxqabadka SEO ee Semalt.
Waa maxay Falanqaynta Waxqabadka SEO?
Falanqaynta waxqabadka SEO waa baaritaanka taxaddar leh ee bog ku saabsan cabirro kala duwan oo la xiriira SEO. Waxaa ka mid ah xisaabinta degel websaydhka iyo aqoonsashada baahiyaha kobcinta ee darajo sare oo ah SERPs.
Falanqaynta waxqabadka SEO waxay kaa caawineysaa inaad ogaato bal in istaraatiijiyadaada SEO-ga ay ku socoto wadadii iyo arrimaha, arrimaha saamaynaya darajadda boggaaga, waxaad u baahan tahay inaad wax ka qabato.
Muhiimadda Falanqaynta Waxqabadka SEO
Fikradaha laga bixiyay falanqaynta waxqabadka SEO ayaa ugu dambeyntii kaa caawin doonta waxyaabaha soo socda:
Caawinta fidinta gaaristaada
Waxay ku wadataa gaadiid badan boggaaga internetka.
Waxay ka caawineysaa shabakadaada inay darajo sare ka gaarto natiijooyinka raadinta.
U oggolow inaad si dhakhso leh u gaadho ujeedooyinkaaga xirfadeed.
Falanqeyntaan, waxaad sameyneysaa fakir iyo go'aano istiraatiiji ah. Waqtiga iyo lacagta loo baahan yahay si loo wanaajiyo darajada boggaaga ayaa waliba si aad ah hoos ugu dhacday.
Maqnaanshaha falanqaynta waxqabadka SEO oo dhammaystiran, samaynta go'aano wargelin ah oo lagu wanaajinayo darajadda barta internetka natiijooyinka raadinta Google waa wax aan suurtagal ahayn.
Waxyaabaha lagama maarmaanka u ah waxqabadka SEO
Horumarkii ugu dambeeyay ee algorithms-ka Google wuxuu diirada saaraa goobaha abaal-marinta ee muujiya inay ku habboon yihiin waxyaabaha la soo koobay, oo kaliya aan loo istcimaalo tabaha farsamada si ay u kala sarreeyaan.
Waxaa jira asaasiyiin fara badan oo SEO ah oo caawiya falanqaynta iyo tayaynta mareeg. Qaar ka mid ah daruuri ayaa ah:
Erey bixin Muhiim ah
Hawlgallada Warbaahinta Bulshada
Soosaarista Mawduucyada Mawduucyada
Aynu fahamno mid kasta oo ka mid ah:
Websaydh kastaa waa inuu siiyaa macluumaad farsamo dadka gurguurta si ay u fahmaan, u ogaadaan, uguna taxan natiijooyinka raadinta. Farsamooyinkan ayaa ah mid firfircoon ama aan gudbin, waxay kuxirantahay falalka milkiilaha websaydhka.
Farsamooyinka firfircoon waxay ka kooban yihiin dadaallo la qaaday si loogu wargaliyo matoorada raadinta wixii ku saabsan isbedelada goobta. Tusaalahan qaabkan ayaa ah isku xirka websaydhkaaga qalabka qalabka websaydhka ee matoorada raadinta ee lagula socdo wax qabadkooda SEO.
Farsamooyinka dadban waxay ka kooban yihiin dadaallo la qaaday si loogu bixiyo matoorada raadinta macluumaadka loo baahan yahay ee ku saabsan bogagga bogga. Tusaalaha loo maro habka tooska ah waa in lasiiyaa feylasha XML ee matoorrada raadinta si ay sifiican u fahmaan waxa ubaahan u baahanyahay tixraaca.
Haddii boggaaga internetka uusan lahayn SEO, dhammaan dadaalada aad geliso sameynta iyo soo saarista waxyaabo xiiso leh waa qashin maadaama matoorada raadinta ay ku guuldareystaan inay tilmaamaan boggaaga.
Furayaasha ereyada waa ereyo ama oraahyo ay dadku u isticmaalaan inay ku raadiyaan badeecado, adeegyo, ama macluumaad iyagoo adeegsanaya matoorada raadinta. Daabacayaasha waxyaabaha ka kooban iyo milkiilayaasha websaydhada ayaa tilmaamaya ereyada furaha ee badanaa loo adeegsado raadinta waxsoosaarkooda ama adeegyadooda, oo markaa, abuuro waxyaabo ku habboon.
Markaad hesho ereyada muhiimka ah ee ku habboon hadiyadaada, way fududaanaysaa in la abuuro waxa ku jira iyadoo la adeegsanayo. Natiijo ahaan, boggaaga internetka wuxuu soo jiidan doonaa taraafikada aad iyo aad u tiro badan.
Xusuusnow inaadan isticmaalin, ha u isticmaalin ama ku xadgudbin ereyada furaha ah maxaa yeelay markay taasi dhacdo, matoorada raadinta waqti badan kuma lumin inay ciqaabaan degel.
Websaydhyadu waxay ku wada xiriiraan bogagga shabakadda, bogagga shabakaddani waa inay diiradda saaraan nuqul-nuxurka (raac qaar tilmaamo gaar ah iyo xeerar la xiriira waxa ku jira) si kor loogu qaado gaaritaanka iyo mashiinka raadinta ee websaydhka.
Koodh gareynta waxa ku jira qaab dhismeedka saxda ah ee websaydhka. Waa inay sharraxdaa nidaamka nuxurka websaydhku u leeyahay matoorada raadinta. Hubso cinwaanka websaydhka, cinwaankiisa iyo cinwaankiisa hoose (H1, H2, H3, H4), nuxurkeeda, iyo waxyaabo kale in loogu codeeyay aqoonsiga si sahlan ee matoorada raadinta.
Waa inaad sidoo kale isticmaashaa ereyada muhiimka ah ee habboon iyo inaad cufnaanta ku haysaa boggaaga. Ka taxadar tilmaamaha cufnaanta ereyga ee fiidiyowyada iyo sawirrada sidoo kale.
Maanta, dib-u-xirnaanta ayaa muhiim ah maxaa yeelay waxay saameyn ku leeyihiin qiimeynta websaydhka ee matoorada raadinta. Dib-u-celinta dhabarku waa websaydh si fudud ugu xidhan bog-websaydh.
Fahmitaanka ciyaarta laf-dhabarta waa waxoogaa adag. Waxaa jira laba shay oo mid loo baahan yahay in la fahmo:
Dhammaan bogagga ku xardhan Google waxaa la siiyaa PageRank iyadoo lagu saleynayo tirada bogagga dib ugu xirmaya.
Xirmooyinka dib-u-soo-noqoshada ee ka imanaya hal degel oo leh PageRank sarreeya ayaa leh culeys dheeri ah marka la barbar dhigo dib-u-celinta ka timaadda boqollaal bog oo leh PageRank hooseeya.
Haddii websaydhkaagu uu helo xiriiriyeyaal websaydh ah oo leh PageRank sare, matoorada raadinta waxay bilaabaan inay tixgeliyaan websaydhka mid muhiim ah, sidaas darteedna, u darajo sare.
Aaladaha warbaahinta bulshada ayaa aad waxtar u leh marka ay timaado wadaagida waxyaabaha ka kooban. Wadaagista maqaal ama faylka warbaahinta ee aaladaha warbaahinta bulshada sida Facebook, Twitter, LinkedIn, iyo kuwa kale ayaa la macno ah sameynta boggag sare oo bogga bogga.
Sida ku dhawaad waxkasta oo ay wadaagaan warbaahinta bulshada qofkastaba, dadka qaar ayaa qaba in wadaagis badan ay wanaajiso darajada websaydh. Hagaag, boqolkiiba boqol run maaha.
Qalabka raadinta, xoogaa kooban ayaa ka mid ah haddii uu leeyahay saamiyo badan oo ay weheliso hawlgal sare. Waxaa ku jira tirada jecel, faallooyinka, iyo dib-u-ticmaallada ama dib-u-wadaagga.
Haddii taasi ku dhacdo websaydhkaaga, matoorada raadinta ayaa garwaaqsan doona in waxa ku jira uu qiimo leeyahay isla markaana soo urursaday qadarin xagga ficillada. Marka, waxay u qiimeyn doonaan si dabiici ah.
Mashiinnada raadinta, sida Google, darajooyinka websaydhada maaha kaliya sababtoo ah isku-duubnida farsamo, fureyaasha, maaddada, iyo wadaagista warbaahinta bulshada laakiin sidoo kale waa waayo-aragnimada dhabta ah ee isticmaaleyaasha leh mareegaha bogga.
Khibradda adeegsadaha waxaa ku jira qaabeynta websaydhka iyo meelaynta waxyaabaha ku qoran. Marka lagu daro aasaaska kale, Google sidoo kale waxay tixgelisaa meelaynta wicitaanka waxyaabaha ficil ee websaydhka.
Google ayaa qaddarinaysa haddii cunsurrada ay ka midka yihiin xayeysiinta ama badhanka is-qoritaanka ama batoonka iibsiga la heli karo iyadoon bogga loo rogin. Haa, waxay faa'iido u leedahay darajada degel.
Macnaheedu maahan in si xun loo adeegsaday qaybtan (kor ka muuqata isugeynta). Tusaale ahaan, Google waa ciqaab marka ay ogaato in degelkaagu ku leeyahay xayeysiisyo badan oo ka sarreeya xarka.
Degel waa inuu lahaadaa waxa ku jira oo la soo koobi karo oo lagu meeleeyn doono makiinadaha raadinta. Haddii ay jiraan bogag kooban oo bogag internet ah, matoorada raadinta waxay leeyihiin xiriiriyeyaal badan oo tixraac ah.
Waa sababta ugu caansan uguna guusha ah ee bogagga wararka. Waxay si joogto ah u daabacaan waxyaabo badan oo ka kooban, taas badalkeed, ma aha oo kaliya tirada bogagga la tilmaamay laakiin sidoo kale taraafikada.
Waxa kale oo jira boggag khaas ah oo si joogto ah u dhejinaya maqaallada leh keywords isku mid ah iyo mowduucyo isku mid ah. Qaab-dhismeedkaani wuxuu u sheegayaa Google in qoraaladan gaarka loo leeyahay ay yihiin kuwo macluumaad leh. Marka, waxay iyaga u sarreeyaan iyaga.
Waxaas oo dhan waxaa loola jeedaa inta jeer ee daabacaadda nuxurka ah waa cunsur muhiim ah. Haddii aad si joogto ah ugu dhajiso boggaga cusub, tayadeysan, iyo waxyaabaha ku habboon boggaaga, matoorada raadinta ayaa kormeeri doona oo horumarin doona darajaynteeda.
Falanqaynta Waxqabadka SEO ee Semalt
In la daryeelo dhammaan waxyaabaha daruuriga u ah SEO uma sahlana shaqsi ahaan. Taasi waa sababta ay u jiraan shirkadaha suuqgeynta dhijitaalka ah, sida Semalt, oo leh khubaro wax ka qabta waxyaabo kala duwan oo SEO ah.
Shirkadaha sida Semalt , khabiirada qaar waxay xukumaan cabirka nuxurka, qaar waxay gacanta ku hayaan farsamooyinka, qaar waxay diiradda saaraan dib-u-xirida, waana sidan oo kale. Wadajirka wadajirka ah ee khubaradan ayaa keenaya hagaajinta waxqabadka SEO ee websaydh.
Semalt wuxuu bixiyaa adeegga falanqaynta shabakadda ee xiga ee ah:
Wuxuu kormeeraa suuqa adiga
Waxay ilaalineysaa sidoo kale qiimeynta tartamayaashaada
Wuxuu ku siinayaa macluumaad dhammaystiran oo ku saabsan meheraddaada
Semalt wuxuu ka caawiyaa dhammaan KPIs (Tilmaamayaasha Waxqabadka Muhiimka ah) ee guusha SEO. Qaar ka mid ah waa:
Falanqaynta shabakadda oo dhameystiran
Taraafikada raadinta dabiiciga ah
Hawlgelinta warbaahinta bulshada
Sidee Falanqaynta Websaydhku u Shaqeeyaa?
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso Semalt oo aad bilowdo hawsha si aad u hesho xogta lafa-gurista. Marka howshu dhamaato, waxaad heli doontaa warbixin faahfaahsan oo ay kujirto:
qiimeynta boggaaga marka loo eego heerarka warshadaha ee qaabeynta websaydhada iyo SEO
Waxaad kaloo u rogi kartaa warbixintan faahfaahsan CSV iyo sidoo kale qaabab PDF ah oo waxaad kala soo bixi kartaa kombiyuutarkaaga. Semalt wuxuu sidoo kale oggol yahay emayl u dirista warbixinta falanqaynta.
Laga bilaabo falanqaynta degelka waa sahlan tahay waana bilaash. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad gasho bogga internetka, iyo daqiiqad ama labo gudahood, waxaad ku baran doontaa sababaha ka horjoogsanaya websaydhkaaga inuu ka gaaro darajo sare natiijooyinka raadinta.
Si aad ugu darto boggaga 'PRO falanqaynta' lacag la’aan, waxaad guji kartaa halkan oo aad hoos ugu dhaadhacdaa. Markaad hesho, kaliya geli magaca boggaaga oo guji badhanka 'Hadda Bilow'.
Falanqaynta waxqabadka SEO waa mid muhiim u ah hagaajinta heerka darajada websaydhka ee matoorada raadinta. Waxay kaa caawineysaa inaad garto waxyaabaha ka masuulka ah sumcadda boggaaga.
Falanqaynta ayaa ah tillaabada ugu horreysa ee lagu horumarinayo waxqabadka SEO ee bog. Waxay kaala socodsiineysaa waxyaabaha u baahan hagaajinta, sidaa darteed ka shaqee iyaga.
Si kastaba ha noqotee, sida ugufiican ayaa ah in la shaqaaleeyo adeegyada wakaaladda suuq geynta dijitaalka, sida Semalt. Semalt, waxaad ku nasan kartaa sariirtaada oo aad daawan kartaa websaydhka oo si aad ah u caan ah.